आलु पोर्क पसलको साथ स्ट्युड - थर्मोमिक्स रेसिपीज ThermoRecines
पोर्क पसलहरूको साथ स्टिउन्ड आलु
CARNES49 मिनेट4 व्यक्ति
सुँगुरको बरग संग स्टिउन्ड आलु हो एक आदर्श स्टू। यो Thermomix® को साथ बनेको हो र मलाई यो दिनहुँ धेरै मन पर्छ किनभने यो धनी र बनाउन सजिलो छ।
यो सप्ताहन्तमा तयार गर्न को लागी एक शानदार पकवान हो परिवार खाना किनभने, धनी हुनुका साथै बच्चाहरूले यसलाई अद्भुत रूपमा खान्छन्।
उनीहरू आलु र ब्रोथ मन पराउँछन् र म पनि सामान्य रूपमा तिनीहरू मध्ये केही काट्छु रिब बिट्स त्यो धेरै रहन्छ रसदार खाना पकाएर र तिनीहरूले "बल" गर्दैनन् जस्तो उनीहरू भन्छन्।
मलाई यो सेवा समाप्त हुन सके पछि यसको सेवा गर्न मन पर्छ र यसलाई "पफ र सिप" का बीचमा लिन्छु। यो खुशी हो तातो हुनु खानाको साथ र विशेष गरी राम्रो स्ट्युको साथ।
यो नुस्खा प्राय: बनाइएको हुन्छ पसल एडोबाडायद्यपि म तिनीहरूलाई सामान्य रूपमा मरीनेट गरिएको खरीद गर्दिन, त्यसैले उनीहरू मेरो बौनेराको लागि कडा स्वाद चाख्दैनन्।
1 पोर्क पसलहरूको साथ स्टिउन्ड आलु
चिसो दिन को लागी एक रसिलो र उत्तम स्ट्यू।
खाना पकाउने समय: 49M
कुल समय: 49M
Inated०० ग्राम मरीनेट गरिएको पसलिका, भागहरूमा काटिएको
G०० ग्राम आलु, खुल्ला र मध्यम टुक्रा मा काट
हामीले गिलासमा प्याज, लसुन र खुर्सानीका टुक्राहरू राख्यौं। हामी दौरान काट्छौं Seconds सेकेन्ड, गति 4। हामी तरकारी पर्खालबाट स्पट्युलाको साथ ब्लेड तिर कम गर्दछौं।
हामी गिलासमा तेल खन्याउँछौं र फ्राई गर्दछौं Minutes मिनेट, १००º, गति १।
हामी पुतली ब्लेडमा राख्छौं, पसलहरू र प्रोग्राम थप्दछौं Minutes मिनेट, १००º, गति १।
हामी १०० ग्रिन पानी र कार्यक्रम थप्छौं Minutes मिनेट, १००º, गति १।
आलु र तेज पात थप्नुहोस्। Sauté Minutes मिनेट, १००º, बाँया पालो, चम्चाको गति।
बाँकी पानी (२०० g) र मसाला थप गर्नुहोस्। हामी प्रोग्राम २२ मिनेट, १००º, बाँया पालो, चम्चाको गति, बेकर नराखी। हामी टोकरी माथि नछोडीकन फाल्नुबाट रोक्न सक्छौं।
समाप्त भएपछि, हामी यसलाई गहिरो डिशमा राख्छौं र सेवा गर्दछौं।
थप जानकारी - मह रबहरू
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: CARNES, Celiac, सजिलो, ल्याक्टोज असहिष्णु, अण्डो असहिष्णु, १ घण्टा भन्दा कम, बच्चाहरूको लागि व्यंजनहरु
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » CARNES » पोर्क पसलहरूको साथ स्टिउन्ड आलु
म यस प्रकारको स्टू बनाउँदिन झण्डै कुनै शोरब संग कि तिनीहरू एक असिलो जस्तै देखिन्छन् जुन हामी यहाँ भन्छौं, तथ्य यो हो कि तिनीहरूले यसलाई काँटा र चक्कुले खाए पछि त्यहाँ कुनै समस्या छैन र यो स्वादिष्ट छ, हैन?
यो सत्य हो, थर्मो, यो स्वादिष्ट छ। शोरबा बिना यो पनि स्वादिष्ट हुनेछ। शुभकामना।
यो स्वादिष्ट देखिन्छ ... म भर्खर तपाईलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहान्छु, यी रेसिपीहरू TM-31 का लागि हो, हैन?
किनभने मसँग TM-21 छ र बायाँ र चम्चाको वेगमा मोड्ने विकल्पले काम गर्दैन।…
यो थाहा छ कि टीएम २१ मा कुनै विकल्प छ कि यी हो
नमस्ते कारमेन, जब हामीले "बायाँ मोड र स्पून स्पीड" राख्छौं, तपाईंले बटरफ्लाइलाई ब्लेड र स्पीड १ मा राख्नुपर्छ।
मलाई आशा छ तिमीलाई यो मन पर्ने छ। शुभकामना।
नमस्ते, मैले यो नुस्खा बनाएको छु तर के पुतली आफैं बाहिर निस्कनु र सबै आलुहरू झर्नु सामान्य हो? जब म भान्साकोठामा फर्कन्छु, त्यहाँ ढक्कनको प्वालबाट पुतलीको चुच्चो टाँसिएको देखिन्छ। तपाईंले यसलाई सबै तरिकाले ब्लेडमा छोड्नुपर्छ, हैन? वा यो "क्लिक" ध्वनि छ?
सबै चीजको लागि धेरै धन्यवाद।
पाउला, कति पागल छ कि तपाईंले यो पहिले देख्नु भएन र तपाईंको आलु टुक्रियो किनभने नुसार राम्रो छ।
यो केही स्ट्युमा मलाई भयो, तर म भान्छामा थिएँ र म मेशिन रोक्न सक्षम भएँ, गिलास खाली भाँडामा हालेर पुतलीमा राखियो।
तपाईले पुतलीलाई ब्लेडमा राख्नुहुन्छ र यसलाई दायाँतिर घुमाउनुहोस् जुन यो फिट हुन्छ, र यसलाई राम्रोसँग जोडिएको छ र बाहिर नआउने सुनिश्चित गर्न माथि तान्नुहोस्। तर तपाईले कुनै पनि "क्लिक" सुन्न पर्दैन।
फेरि प्रयास गर्नुहोस् तपाईलाई नुस्खा मनपर्नेछ।
पाउला, म फेरि यो प्रश्नको उत्तर दिन्छु किनकि यस सप्ताहन्तमा पहिलो थर्मामिक्स कress्ग्रेसन थियो र मैले केहि पनि भनें जुन तपाईंले मलाई उत्तर दिनु भयो जुन मैले तपाईंलाई तपाईंले भनेको पुतलीको बारेमा सोध्दा सुधारिएको थियो। मैले तपाईंलाई राखेको तरीकाले यो सही हो यदि पछाडि हामीले ब्लेडलाई दायाँ घुम्न दियौं, तर यदि हामीले पछि यसलाई बायाँ पल्ट्यौं भने हामीले पुतलीलाई बायाँपट्टि राख्नुपर्दछ, किनकि अन्यथा यो एकदम छ। सम्भावना छ कि पहिलो केहि ल्याप्स बन्द आउँछ।
अभिवादन र मलाई आशा छ कि हामी आफ्नो साथी पुतली संग यो सानो विस्तार हामी सधैं सम्झना गर्नेछौं।
शुभ प्रभात म्याम वा मिस। यस पृष्ठमा मैले डाटा देख्छु जुन years बर्ष अघि छ र मलाई यसको मतलब के हो भनेर थाहा छैन। तर हे संक्षेपमा, मेरो प्रश्न यो हो कि मैले आलुको पसलका लागि यो विधि बनाएँ, शाब्दिक रूपमा हाउस रेसिपी प्रतिलिपि गर्दै र दुवै पटक आलु पूर्ण रूपमा शुद्ध बाहिर आयो।
तपाईं मलाई मार्गदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। भन्नुहोस् मसँग मसिनको नयाँ मोडल छ।
हेलो एडोल्फो, आकार ठूलो मा आलु राख्न कोशिस गर्नुहोस्, ताकि तिनीहरू खाना पकाउने समयमा अलग हुँदैन वा तिनीहरूलाई पछि जोड्न। हुनसक्छ तपाईंले प्रयोग गर्ने आलुहरू यहाँका भन्दा नरम छन्।
goodiiiiiisimooooooooo !! म गिलास सेतो वाइनको साथ स्ट्रि-फ्राई पनि गर्छु र यो प्रभावशाली छ! चुम्बन
धेरै धेरै धन्यवाद मार्था, अर्को राम्रो विचार के हो भने अर्को पटक म यसलाई मद्यको स्पर्शले प्रयोग गर्ने छु, जुन स्टुमा ठूलो छ।
म टिएममा नयाँ छु, यद्यपि मैले सधैं तपाईले प्रस्ट पार्ने प्रकारका धेरै स्ट्युहरू पकाएको छु र सत्य यो हो कि हामी उनीहरूलाई घरमा माया गर्छौं, तर यस नुस्खाबाट मैले राम्ररी बुझ्न सकिनँ कि कसरी पसलहरू सम्मिलित छन्, के तपाई स्पष्ट गर्न सक्नुहुन्छ? यो मेरो लागि कृपया ...?
म्याकालाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते म्याका, पहिले प्याज, लसुन र खुर्सानी म्यास गर्नुहोस्। तपाईले तेल थप्नुभयो र १० मिनेटका लागि प्रोग्राम गर्नुहोस्। यस समय पछि, तपाईं ब्लेडमा पुतली राख्नुहुन्छ र पसलहरू थप्नुहुन्छ।
आशा छ कि तपाईंलाई यो मनपर्‍यो, यदि तपाईंको केही प्रश्नहरू छन् भने कृपया हामीलाई जानकारी दिनुहोस्। शुभकामना।
म तपाईं मलाई पठाएको मासु कसरी पठाई दिन चाहन्छु
Gertrudis लाई जवाफ दिनुहोस्
गर्ट्रुडिस म तपाईलाई काटिएको मासुको लागि एक नुस्खा भेट्टाउने प्रयास गर्नेछु, यदि मैले फेला पारेँ भने म यो तपाईंलाई दिनेछु।
नमस्ते, मेरो प्रश्न यो हो कि यदि पुतली ब्लेडमा राखिएको छ सबै स्ट्यूबाट जान्ने हो भने स्ट्यु समाप्त नभएसम्म यसलाई हटाइने छैन, म एक नौसिखिया हुँ र मलाई अझै शंका छ, धन्यवाद
नमस्ते मोनिका, ब्लेड अन्त्यसम्म हटाइने छैन। यसरी आलु टुक्रिने छैन। मलाई आशा छ तिमीलाई यो मन पर्ने छ। शुभकामना।
एंगेल्स पेरिज भन्यो
मलाई तपाईंको पृष्ठ मनपर्‍यो। म तपाईंलाई एक नुस्खा पठाउँदैछु जुन बच्चाहरूलाई वास्तवमै मनपर्दछ।
१०० GR मारिया कुकीहरू
दहीको १ खाम
कुकीहरू र चिनी seconds सेकेन्डको गति।
दूध र दही लिफाफा minutes मिनेट speed ० गति २
ANGELES PEEZ लाई जवाफ दिनुहोस्
यो केक कस्तो राम्रो देखिन्छ, Mª। एन्जलहरू! म यो गर्न जाँदैछु। धेरै धन्यवाद।
म यो केक बनाउन जाँदैछु तर मलाई श doubt्का छ: कुकिज र चिनी दुध र दही थप्दा वा गिलासमा रहनुपर्दछ वा 8 मिनेट पछि थपिन्छ।
जुआनी, यो प्रश्न तपाईले बनाउन चाहानु भएको केकको टिप्पणीमा राख्नुहोस्, मलाई राम्रोसँग थाहा छैन तपाईले केकलाई के मतलब स्टुमा राख्नु भएको हो। शुभकामना
अना मिलाग्रोस भन्यो
धेरै राम्रो, मेरो पतिले उनीहरुलाई धेरै मन पराउनुभयो, तपाईका व्यंजनहरुका लागि धन्यबाद
एना मिलाग्रोसलाई जवाफ दिनुहोस्
आना, म खुशी छु कि तपाईं उनीहरूलाई मन पराउनुहुन्छ, मेरो परिवारले पनि उनीहरूलाई माया गर्‍यो।
हाम्रो व्यंजनहरु तयार गर्न तपाईलाई प्रोत्साहित गर्नु भएकोमा धन्यवाद।
रोजा मारिया भन्यो
मलाई रिब्ड पोटाटोहरूको प्राप्ति जान्न चाहन्थें, म पुरानो मेशिन हुँ र स्पिड र बायाँ ड्राईभ म यो कसरी गर्छु
रोजा मारियालाई जवाफ दिनुहोस्
रोजा मारिया, तपाईं पुतली राख्नुहुन्छ र तपाईंको मसिनमा सब भन्दा ढिलो गति राख्नुहुन्छ 1 र त्यसरी तिनीहरू तपाईंको लागि राम्रो हुनु पर्छ।
हेलो, मलाई थाहा छ कि धेरै मानिसहरु तपाईको रसीपहरु हुन् र यो पट्टिहरु संग पट्टिहरु मध्ये एक हो, धन्यवाद
नमस्ते राकेल, तिनीहरू सामान्यतया4व्यक्तिको लागि हुन्। शुभकामना।
सिल्भिया, पाउलाको जस्तो मलाई पनि त्यस्तै भयो, पुतली बाहिर आयो र आलु टुक्रियो। तर तपाई यसबाट बाक्लो सास बनाउन सक्नुहुनेछ र यसमा पसलहरू धुनु सक्नुहुनेछ। मैले अलिक बढी समय लिएको छु, किनकि मासु अझै अलि कडा थियो।
मलाई आशा छ मेरो परिवारले भोली मनपराउनेछ।
मारिया जोस, मैले तपाईलाई भन्नु पर्छ कि त्यहाँ एउटा भनाइ छ जुन यसो भन्छ: "तपाईं अर्को कुरा थाहा नगरी कहिल्यै सुत्नुहुनेछैन।" ठिक छ, आज मलाई पहिले भन्दा धेरै भएको छ, जब मैले पाउलालाई जवाफ दिएँ मैले बुझें कि यो पुतलीलाई राख्ने सही तरिका हो ताकि यो ब्लेडबाट नआओस् र यो हो, यदि ब्लेडहरू दायाँ तिर जाँदै थिए। । यस सप्ताहन्तमा थर्मोमिक्स कंग्रेसमा मैले धेरै तार्किक रूपमा केही कुरा सिकें, यदि ब्लेडहरू पछि बायाँतिर घुम्न जाँदै थिए भने, हामीले तिनीहरूलाई राख्नुपर्ने थियो र तिनीहरूलाई अलिकति बायाँतिर घुमाउनुपर्ने थियो, उनीहरूले राम्रोसँग हुक गरेका थिए भनेर ध्यान दिएर, यदि हामीले तिनीहरूलाई हुक गर्यौं भने। दायाँ र बायाँ तिर फर्के सबैभन्दा सुरक्षित कुरा हो कि तिनीहरू बाहिर निस्कन्छन्।
अर्को पटक तपाईलाई पहिल्यै केहि नयाँ थाहा भयो जस्तो मसँग भएको छ।
नमस्ते केटीहरू !! मलाई तपाईंको वेबसाईट मनपर्छ जुन मैले भर्खर खोजेको छु। समय को रूप मा, तपाईं कम मात्रा बनाउन भने तपाईं समय कम गर्न छ? खुशी हुनुहोस् र तपाईंको व्यंजनहरु को लागी धन्यवाद।
कुनै मार्था, यदि तपाईंले कम बनाउनुभयो भने, समय कम हुनेछैन, किनभने आलुहरूलाई त्यस समय कोमलता हुनुपर्दछ र तिनीहरूको बिन्दुमा। यद्यपि यो नुस्खा यति राम्रो छ कि यो अलि कम देखिन्छ वा तपाईंले यसलाई दुई पटक राख्नुमा कुनै आपत्ति छैन।
केटीहरू, औंला चाट्नु राम्रो छ। मसँग टीएम २१ छ र मैले यसलाई तापक्रममा तपाईले भने जस्तो छोडिदिएँ, किनकि हामीलाई यो एकदम मिठो मनपर्दैन। ऊ दोहोर्याउन बाहिर आयो। तपाईको सहयोगका लागि धन्यबाद।
मार्था, म खुशी छु कि तपाईंले तिनीहरूलाई मन पराउनुभयो हामीलाई हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यबाद। शुभकामना।
Gemma Saez भन्यो
मैले हिसाबमा यो नुस्खा बनाएको छु र मेरो भलाइ कस्तो सफलता! शानदार, धेरै धेरै धन्यबाद
Gemma Sáez लाई जवाफ दिनुहोस्
मणि, म धेरै खुशी छु कि तपाईलाई यो नुस्खा मनपर्दछ। सत्य यो हो कि यो सम्पूर्ण परिवारको लागि एक सफलता हो।
मैले भर्खरै यो नुस्खा बनाएँ ... मलाई यो मनपर्दछ! कति सजिलो र धनी। धेरै समय अघि मसँग टिएम थियो र तपाईंको पृष्ठ आविष्कार भएको थियो। धन्यबाद
PATRY लाई जवाफ दिनुहोस्
प्याट्री मँ खुसी छु कि तपाईंलाई हाम्रो व्यञ्जनहरू मनपर्‍यो र उनीहरूले तपाईंलाई यस सुपर रोबोटबाट अधिक फाइदा लिन प्रोत्साहन गर्दछन्, हामीलाई अनुसरण गर्नको लागि धन्यवाद।
स्वागत प्याट्री! मलाई खुशी छ कि तपाईंलाई यो मन परेको छ र म आशा गर्दछु कि यी रेसिपीहरूले तपाईंलाई Thermomix बाट अधिक फाइदा लिन मद्दत गर्दछ। यो एक अद्भुत मेसिन हो। शुभकामना।
यस नुस्खाको सट्टामा यसको सुँगुरको पट्टिहरू बनाउनुको सट्टा पातलो मासुले यसलाई पनी बनाउन सकिन्छ? तयारी उस्तै हो वा यसले खाना पकाउने समय लिन्छ।
मारीमारलाई जवाफ दिनुहोस्
मारीमार मलाई लाग्छ यो तयार हुन सक्छ तर दुब्ला मासु यसलाई टेन्डर बनाउन पकाउन केहि बढी समय चाहिन्छ र हुनसक्छ आलु अलिकति खस्नेछ। आलुहरू थप्नु अघि मासुलाई अलि बढी समय दिनुहोस् र हेर्नुहोस् यसले कसरी काम गर्दछ।
मैले तिनीहरूलाई आलुको अगाडि बीस मिनेट सम्म मासु राखेर तयार पारेको छु यद्यपि तिनीहरू निरन्तर रहिरहन्छन् र मलाई यो नुस्खालाई थर्मोमिक्समा अनुकूलन गर्न मनपर्दछ किनकि हामीलाई यो मनपर्दछ। म पानी थप्छु वा यसलाई पनि त्यस्तै मात्रामा छोड्दछु रेसिपीमा। ।धन्यवाद
नमस्ते Inma, मासु संग नुस्खा तपाईं यसलाई बनाएको कसरी हो, तर यो मासु को तपाईं प्रयोग प्रकार मा निर्भर गर्दछ किनभने त्यहाँ केहि कडा छन्। यदि मासु कोमल छ भने, म कूल 40० मिनेटको लागि के गर्दछ पर्याप्त हुनुपर्दछ र पानीको सम्बन्धमा म १०० जीआर थप्छु। प्लस शुभकामना।
मारीमार, २०० ग्राम पानी र मासु पकाउने बारे minutes० मिनेट राख्नुहोस् त्यसपछि आलुहरू राख्नुहोस् र तिनीहरूलाई व्यंजनमा संकेत गरिएको समय राख्नुहोस् यदि तपाईंले देख्नुभयो कि यससँग पर्याप्त पानी छ भने पछिल्लो १० मिनेटमा बीकर हटाउनुहोस् र यसले यसलाई मद्दत गर्दछ वाष्पीकरण पानी प्रयास गर्नुहोस् र तपाईं मलाई भन्नुहुनेछ। शुभकामना
नमस्ते, म यसमा नयाँ छु, म शुरू गर्दै छु, मैले पहिले नै एक केक, क्रोकेट, पिज्जा, मसूर पकाएको छु र म पागल हर्षित छु मलाई तपाईंको व्यंजनहरू, आवश्यकताहरू र सजिलो मन पर्छ।
तर मेरो समस्या यो हो कि म मेरो २ बर्षको उमेरका लागि र आफ्नै लागि पकाउछु, र स्ट्युहरू2व्यक्तिको वा बढीका लागि हुन्।
यदि मैले आधा भागमा नुस्खा काट्यो भने, तिनीहरू राम्रा नै हुनेछन्।
अब म के गर्न चाहन्छु पोर्क पसलको साथ स्ट्यु गरिएको आलु हो।
न केवल तपाईले सामग्रीहरू कम गर्नुपर्दछ, तर समयहरू पनि। समयको साथ तपाईं यसको ह्या hang प्राप्त गर्नुहुनेछ !!
जे भए पनि तपाइँलाई भन्नुहोस् कि हरेक नुस्खामा तपाइँ रात्रिभोजको संख्या देख्नुहुनेछ। अर्को विकल्प स्थिर गर्न को लागी हुनेछ, यो मेरो लागि धेरै व्यावहारिक छ !!
नमस्ते ... म नौगट फ्लान बनाउन चाहान्छु ... म वेबमा हेरेर हेरेँ र मैले यसलाई देखिनँ ... यो कहाँ छ? धेरै धेरै धन्यबाद
सोनिया, हामी केहि दिनहरूमा नौगट फ्ल्यान प्रकाशित गर्नेछौं ताकि तपाईं यसलाई क्रिसमसको लागि बनाउन सक्नुहुन्छ।
मैले भर्खरै यो पृष्ठ पत्ता लगाएँ र मलाई यो मनपर्‍यो, मसँग सिलियाक केटी छ, यदि सम्भव छ भने तपाईले थप रेसिपीहरू वा प्रतिस्थापन गर्न सकिने सामग्रीहरू राख्न चाहानुहुन्छ, किनकि मैले देखेको छु कि तपाईंसँग केही उत्कृष्ट व्यंजनहरू छन्। अभिवादन
अरोरा, अवश्य पनि हामी नयाँ रेसिपीहरू राख्नेछौं जुन तपाईं आफ्नो सानो बनाउन सक्नुहुनेछ। हाम्रो ब्लगमा, माथिको त्यहाँ एक ट्याब छ जसले celiacs भन्छ, तपाइँले लिन सक्नुहुने हाम्रा सबै प्रकाशित व्यंजनहरू दिनुहुन्छ। जे होस् मसँग सेलिआक भतिजा छन्, मलाई थाहा छैन के केहि सामग्रीहरू छन् जुन तपाईले त्यसलाई सट्टामा राख्न सक्नुहुन्छ। तर नोट गर्नुहोस् कि हामीले प्रकाशित प्रत्येक नयाँ नुस्खा क्याटलोग गरिएको छ वा छैन celiacs ले लिन सक्छ।
जोस "र्याम" भन्यो
नमस्कार, जसरी मैले तपाईंलाई भनेको थिएँ, मैले यो रसीला पकवान बनाएको छु र यो मृत्युबाट बाहिर आइसक्यो, हामीले एउटा खुट्टा पनि छाडेका छैनौं। कृपया अर्को कुरा, मेरी श्रीमती (मोन्टसे) लाई बताउनुहोस् कि जब उनले खाना बनाउँछिन् उनले मलाई छोडिदिन्छन्, तपाईलाई के गर्नुहुन्छ? तपाईले मलाई के गर्नु हुन्छ? तपाईले मलाई एक्लै छोड्नुहुन्न। धन्यवाद
जोस "र्याम" लाई जवाफ दिनुहोस्
हे हेम जोसे। तपाईको श्रीमतीलाई केही भन्नु असम्भव छ किनकि हामी एक अर्कालाई सहयोग गर्छौं र तपाईले हामीलाई खाना पकाउन चाहानुहुन्छ हामी सुपरिवेक्षण गर्न चाहान्छौं, हामी त्यस्तै हौं, हामी जन्मजात जन्मिएको छ, यो जन्मजात हो।
म खुसी छु कि तपाईं यो डिश मनपराउँनुहुनेछ र तपाईं हाम्रो ब्लगको साथ घरमा आनन्द लिनुहुनेछ। तपाई दुवैलाई अभिवादन।
सुप्रभात, मैले नुस्खा बनाएँ, मैले पुतलीलाई भित्र राखें, यो बन्द भएन, तर सबै आलु टुक्रिए, किनकि मैले पसललाई टेन्डर बनाउनका लागि १० मिनेट भित्र राख्नुपर्‍यो। सत्य यो हो कि यो स्वादमा विस्मयकारी छ यद्यपि यस्तो उपस्थितिमा यति धेरै छैन, यो प्युरीको साथ पसलिया बन्यो !!! अर्को पटक म मासु पहिले र आलु अन्तिम राख्छु।
मलाई तपाइँको व्यंजनहरु मनपर्दछ, यसलाई जारी राख्नुहोस् !!!
NARCI लाई जवाफ दिनुहोस्
नार्सी, यदि तपाईंले पुतली राख्नुभयो भने, ती फिर्ता लिनु पर्दैन। म कल्पना गर्दछु कि पुतली विच्छेदन हुनेछ र त्यो कहिलेकाँही किनभने हामी यसलाई ब्लेडमा राम्रोसँग फिक्स गर्दैनौं। तपाईंले यसलाई राख्नु पर्छ र यसलाई अलि अलि मोड्नु पर्छ जुन ब्लेडहरू पछि घुम्न जान्छ।
म आशा गर्दछु यो तपाईंको लागि कसरी काम गर्दछ। शुभकामना
यो मलाई पनि धेरै चोटि भएको छ र यो किनभने पुतली राम्रो संग हुक छैन र जान दिनुहोस्
म नुस्खा प्रयोग गर्दैछु ताकि म तपाईंलाई भन्नेछु, अन्य तरिकाले, मैले तपाईंको पृष्ठबाट प्रयास गरेको अन्य व्यंजनहरू उत्कृष्ट बनेको छ।
नमस्कार! मसँग केही वर्ष पहिले थर्मोमिक्स छ र मैले यसबाट फाइदा कहिले लिएको छैन। धेरै दिन अघि मैले अनुसन्धान गरिरहेको थिएँ र तपाईंलाई भेटें। मेरा अभिभावकहरू यहाँ घरमा हुनुहुन्छ र तिनीहरूलाई थोरै स्ट्युहरू मन पर्छ। हिजो मैले कुखुरा र झींगाले धान बनाएँ, र आज कानमा सेतो सिमी, र मेरा बुबाले उनीहरूलाई प्रेम गर्नुभयो !! उनी भन्छन् कि मैले मेरी आमा हाहामा नेतृत्व लिएको छु! म तपाईंलाई बधाई दिन्छु र तपाईको व्यंजनहरु साझा गर्न को लागी धेरै धन्यबाद। अंगालो।
मलाई खुशी छ कि तपाइँ हाम्रा व्यंजनहरू मन पराउनुहुन्छ। म पालु .्ग सहित लेग्यु स्टू सिफारिश गर्दछु, यो निश्चित छ कि उनीहरूलाई यो मनपर्दछ। यसलाई अनुक्रमणिकामा हेर्नुहोस्।
आज मैले उनीहरूलाई खानाको लागि बनाएको छु, र उनीहरूले यसलाई मन पराए। पसलाहरू बिना अंकित भएका थिए। स्वाद एकदम राम्रो छ तर मैले भन्नु पर्छ कि म केही कडा भएकी छु र मैले केही आलुका टुक्राहरू मात्र बचाएको छु, तर राम्रो छ। मलाई लाग्छ कि अर्को पटकको लागि मैले लामो समयको लागि पसलहरू छोडिदिनेछु, आलुहरू राख्न, ठीक छ ????? व्यंजनहरु को लागी धन्यवाद। शुभकामना
Gepy लाई जवाफ दिनुहोस्
हो, केहि बढी मिनेटमा पसलहरू हाल्ने प्रयास गर्नुहोस् र त्यसपछि आलुहरू राख्नुहोस्। तैपनि, यो घरको एक धेरै राम्रो डिश हो जुन हामी यसलाई माया गर्छौं र मरीनेट गरिएको पसलहरू स्वादिष्ट हुन्छन्।
धन्यवाद, सिल्भिया, मँ। तिनीहरू वास्तवमै राम्रो छन्। शुभकामना
नमस्कार !! मैले भर्खरै आलुहरू पसलका साथ समाप्त गरेँ र यो राम्रो देखिन्छ। निस्सन्देह, ती मसिनो पसलहरू थिए र मैले उनीहरूलाई फ्याट र केही मेरिनाड (मेरो छोराको लागि भन्दा बढी) हटाउन अलि पहिले पकाएँ। म तपाईंलाई स्वादको बारेमा बताउँछु। अभिवादन!
तिनीहरू पक्का स्वादिष्ट हुन्छन्। तपाई हामीलाई बताउनुहुन्छ कि त्यस्तै कसरी छ।
महान !!!!! म पुतली मा नजर राख्न धेरै सावधान रहें र परिणाम उत्कृष्ट छ। धन्यवाद !!
यो कत्ति रमाईलो हुन्छ, जब हाम्रो समय लिने समय र रेसिपी तयार गर्नको लागि हेरचाह गरे पछि यो बाहिर आउँछ। मलाई खुशी छ कि तपाईंलाई यो मनपर्‍यो।
अना बेल भन्यो
म तिनीहरूलाई बनाउँदैछु र तिनीहरूले अद्भुत गन्ध दिन्छन्। तर मैले रिब्सको लागि कुखुराको स्तन प्रतिस्थापित गरें। (मैले सुँगुरको मासु खानु हुँदैन) यहाँ अन्डालुसियामा "आलु" भएको कुखुरा भनिने स्ट्यु पाइन्छ, मैले यहाँ नपुगेसम्म यसलाई प्रयास गरिनँ र यो स्वादिष्ट छ। मैले यसलाई आलु भन्दा 10 मिनेट कम दिएँ। म तिमीलाई भन्छु
एना बेल्टलाई जवाफ दिनुहोस्
कस्तो राम्रो विचार, किनकि बच्चाहरूको लागि यो आदर्श हो, यो कडा छैन र उनीहरूले कुखुरा राम्रोसँग खाए।
राम्रो मैले तिनीहरूलाई २ पटकको लागि गरें, १ को पसलहरू कडा थिए र यसमा म तिनीहरूलाई आलु हाल्नु भन्दा पहिले पकाउन दिदैछु, मैले खाना पकाउन थप पानी पनि थपेका छन्, जुन मेरो भान्सामा बारम्बार नुस्खा हुनेछ। अर्को पटक मैले अधिक आलुहरू राख्नुपर्‍यो उनीहरूले यसलाई मन पराए। धन्यबाद
उनीहरूले घरमा पनि मन पराउँछन्, म खुशी छु कि तपाईलाई आफ्नो स्वाद अनुसार नुस्खा परिमार्जन गर्न प्रोत्साहित गरिएको छ। शुभकामना
धेरै स्वादिष्ट…। त्यहाँ बाक्लो सास रहन्छ, तर पूरै आलु र रिब ठीक। यो मेरो नियमित नुस्खा पुस्तकको हिस्सा हुनेछ किनकि यो सजिलो र छिटो छ। तपाईले हामीलाई सिकाउनुहुने सबैका लागि धन्यवाद ... Gipuzkoa बाट अभिवादन।
कस्तो राम्रो भूमि सुसाना। म त्यहाँका होइन तर म उत्तर र सबै क्षेत्र मन पराउँछु। तपाईलाई घरमा यो नुस्खा मनपराएकोमा म खुशी छु, यो क्लासिक हो। म यसलाई धेरै तयार गर्छु।
नमस्कार, मेरो पुतलीको बारेमा प्रश्न छ, यसलाई कसरी राख्ने भनेर टिप्पणीहरू पढ्दै, ताकि तिनीहरू बाहिर आउँदैनन्, ब्ल्याडहरू कहाँ घुम्दछन् भन्ने आधारमा, पहिले राख्दा तिनीहरू दायाँ पट्टि घुम्छन्। प्रयोग गरिएको छ त्यसैले यसलाई पनि त्यस्तै तरीकाले समायोजित गर्नु पर्ने हुन्छ। यो कचौरा खाली गर्नु आवश्यक छ वा यो पूर्ण गिलासको साथ गर्न सकिन्छ? म एक नौसिखिए हुँ र यो पहिलो पटक हो म यसलाई गर्न जाँदैछु र म चाहन्छु यो पहिलो पटक बाहिर आयो ठीक छ। धन्यबाद
गिलास खाली गर्नु आवश्यक छैन, कहिलेकाँही कहिलेकाहि यसलाई दायाँ तिर राम्रोसँग ठोकर दिएर पनि यो पहिले नै राम्रोसँग जोडिएको हुन्छ र अर्को चरणमा पनि बाँयामा जानको लागि आउँदैन। उनीहरू पक्का छन् तपाईको लागि राम्रो हुन्छ।
नमस्ते सिल्भिया, म तपाईंको व्यञ्जनहरू मन पराउँछु, अब हेरौं कि तपाईंले मेरो प्रश्नको उत्तर दिन सक्नुहुन्छ कि, के तपाईं पनि उही समान नुस्खाको साथ स्ट्युहरू बनाउन सक्नुहुन्छ तर आधा रकम? यति मात्रै हो कि हामी दुई जना, मेरो छोरा र म र व्यंजनहरू एकदम धेरै छन्। । म आलु र पोर्क पट्टी स्टू बनाउन चाहन्छु। धन्यवाद
एन्जलहरूलाई जवाफ दिनुहोस्
अवश्य पनि एन्जलस! आधा रकम कम गर्नुहोस् र तपाईं २ को लागि खाना पाउनुहुनेछ। पक्कै पनि, दुबै खाना पकाउने र पिसाउने समयहरूको साथ सावधान हुनुहोस्। आलु र पसलाहरू बाहेक (जुन परिमाणको मात्रा हो, तिनीहरू पकाउनको लागि जहिले पनि एउटै समय चाहिन्छ) बाँकी तपाईंले थोरै कम गर्नुपर्दछ, ठीक छ?
मैले चकलेट र मारिया कुकीको टोके राखें। मेरो बुबाले हाम्रो लागि यो बनाउनुहुनेछ र हामी प्लेट सफा गर्नेछौं। दुई वा तीन स्क्वायर चकलेटको ग्रेट गर्नुहोस् र एउटा कुकी काट्नुहोस्, मैले यो समाप्त गर्नु भन्दा केही मिनेट पहिले राखें, शोरबामा पिघलाउन पर्याप्त र… तपाईंको औंलाहरू चाट्नको लागि।
नुस्खाका लागि धन्यबाद, म सँधै भाँडामा बनाउँछु, म यसलाई हेर्ने प्रयास गर्छु कि यो कसरी यस्तो हुन्छ।
नोभ लाई जवाफ दिनुहोस्
HI Noave, उहम्म, तपाइँ कस्तो हुनु पर्छ ...। हामी नोट लिन्छौं।
नमस्ते केटीहरू, यो मैले तपाईंलाई पहिलो पटक लेखेको छु, यद्यपि मैले तपाईंको केहि व्यञ्जनहरू बनाइसकेको छु र ती उत्कृष्ट छन्, तर स्वादयुक्त पसलाहरू भएको आलु एकदम राम्रा बाहिर निस्कीएको छ, तर आलु पकाइसकेपछि पनि शुद्ध पारिएको छ पत्र को एक खुट्टा। मसँग tm21 छ र पुतली राख्दै छ र तपाईले भन्नुभएको छ कि तिनीहरू राम्रो गरी सकेका छैनन्, मलाई थाहा छैन यो किन हुन सक्छ, मैले ध्यान दिएँ कि यदि पुतली बाहिर आयो र यसको ठाउँमा थियो, म प्रशंसा गर्छु यो तिमी मलाई मद्दत गर्न सक्छ भने।
सबैलाई अभिवादन छ।
कहिलेकाँही आलु प्रभावहरूको प्रकार ... सबैको समान विशेषता हुँदैन। अर्को पटक फेनिक्स, फ्लेमेन्को वा मोनालिसा प्रयोग गर्नुहोस् ... जुन स्ट्युहरू बनाउनका लागि धेरै राम्रो हुन्छ।
नमस्ते मायरा। मलाई जवाफ दिनु भएकोमा धन्यवाद अर्को पटक म यसलाई ध्यानमा राख्नेछु र म तपाईले मलाई बताएको आलुका साथ गर्नेछु, किनभने हामी उनीहरूलाई स्वादमा धेरै मन पराउँछौं।
म तिमीलाई भन्छु, धन्यवाद र चुम्बन।
मलाई थाहा छैन यो टिप्पणी कहाँ राख्ने, मलाई लाग्छ कि म यसलाई यहाँ राख्न सक्छु। स a्कट थोरै भएको छ, अब म चम्मच थर्मोमिक्सका लागि धेरै विधि बनाउँछु। आज मैले स्वादिलो ​​स्ट्युउड आलु बनाएको छ र तान्ने ठाउँमा तानिन्छ। त्यसैले म मिठाइको लागि कम तेल र नेपोलियन केक खर्च गर्दछु। एक सस्तो र धेरै राम्रो मेनू।
शुभ प्रभात, म तीन हप्ताको लागि थर्मोसँगै छु, हामी एक शुरुवातकर्ता हौं, तर म यसबाट खुसी छु, वास्तवमा।
तपाईंलाई केहि सोध्नुहोस्, हिजो मैले आलुको साथ पसलहरू बनाउने विधि बनाएँ, आलुहरू पनि ठूलो भयो र सस पनि, तर पसलहरू कडा थिए, कुनै सल्लाह?
धेरै धेरै धन्यबाद र तपाईंको खानाको मजा लिनुहोस्।
मलाई लाग्छ त्यो मासुको कठोरताको कारणले छ, त्यसैले तपाईले कसाईलाई यसलाई सानो टुक्रा गर्न लगाउन सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईले १०० ग्राम पानी थपेको चरणमा होईन भने राम्रो गरी १ grams० ग्राम राख्नुहोस् र १ (मिनेट (१० को सट्टामा) १००º राख्नुहोस्।
नमस्ते क्यारोलिना, नुस्खा people व्यक्तिको लागि हो। तपाई हामीलाई यो चाहानुहुन्छ भने हामीलाई भन्नुहोस्! हामीलाई लेख्न को लागी धन्यवाद।
नमस्कार बेलन, यो तपाईंलाई भयो किनकि रिबको मासु अलि कडा थियो र धेरै समय चाहिएको थियो। त्यसैले प्रेसर कुकर राम्रोसँग बाहिर निस्कीएको छ, किनकि यो यो हो कि तपाईंले यसमा दुई पटक वा धेरै રેસिपिको समय राख्नुभएको छ। अर्को पटक उनीहरूलाई छोड्ने प्रयास गर्नुहोस्। भाग्यमानी!
एन्जलस मोन्टेज पुजोल भन्यो
मैले भर्खरै पोर्क रब आलु बनाएँ। केहि सरल र स्वादिलो ​​कुरा केहि समयमा। म रिब एडोब गर्छु र यो एकदम कोमल छ र आलु ठीक छ, खासमा भने होइन।
एन्जलस मोन्टीज पुजोललाई जवाफ दिनुहोस्
त्यहाँ व्यंजनहरू छन् कि सुन मा आफ्नो वजन को लायक छ, सही?
तपाईं पसलहरू केसँग मिलाउनुहुन्छ?
म सधैं मेरो मासुले मलाई सिकाएको मरीनेड तयार गर्दछु।
यो धेरै सरल छ। मोर्टारमा म केही लसुन नुन क्रुश गर्दछु, म यसलाई एकदमै क्रुश गर्दछु, म oregano थप्दछु
र म यसलाई पनि म्यास गर्दछु, मीठो पेपरिका र अलि तेल, म सबै चीज राम्ररी मिलाउँछु।
र त्यो माजाडोको साथ म यसलाई सबै पसलियोंमा वितरण गर्छु र यसलाई लगभग २ for को लागी आराम गर्न दिन्छु
घण्टा मलाई आशा छ तिमीलाई यो मन पर्ने छ। चुम्बनहरू
कती राम्रो, oregano- को साथ
यदि तपाईं आपत्ति गर्नुहुन्न भने म नुस्खा संग टाँसिन्छु।
धेरै धेरै धन्यवाद र चुम्बन !!
समाप्त गर्ने विधि, कृतज्ञ र सरल।
यो गन्ध छ कि यो फीड छ
सास तयार गर्न सम्भव छ र भोलिपल्ट आलुहरू थप्नुहोस्, म सामान्यतया रातमा तयार पारेको खाना छोड्छु, तर आलुहरू एकै रातमा रहन्छन् भने यस्तै हुँदैन, यदि त्यसो भए म कसरी आलुहरू समाहित गर्न सक्छु?
नमस्ते एस्पेरान्जा, तपाई आलुहरू थपेको क्षण सम्म तपाई पूरै रेसिपी अग्रिम गर्न सक्नुहुन्छ
«हामी प्याज, लसुन र काली मिर्चलाई गिलासमा टुक्रामा राख्छौं र4सेकेन्डको लागि काट्छौं, गति 5। हामी तरकारीका अवशेषहरू पर्खालबाट ब्लेड तर्फ स्प्याटुलाको साथ कम गर्छौं।
हामी गिलासमा तेल खन्याउँदछौं र १० मिनेट, १००º, स्पीड १ को लागी फ्राई गर्नुहुन्छ।
हामी ब्लेडमा पुतली राख्छौं, पसलहरू थप्छौं र कार्यक्रम minutes मिनेट, १००º, स्पीड १।
हामी 100 ग्राम पानी र कार्यक्रम 10 मिनेट, 100º, गति 1 थप्छौं। »
यहाँ तपाईं यसलाई चिसो राख्न र फ्रिजमा भण्डार गर्नुहोस्। जब तपाईं डिश समाप्त गर्न चाहानुहुन्छ, निम्नानुसार अगाडि बढ्नुहोस्:
«सबै सामग्री गिलासमा खन्याउ र कार्यक्रम १० मिनेट, १००º, गति १।
आलु र तेज पात थप्नुहोस्। Sauté minutes मिनेट, १००º, बाँया पट्टि घुम्नुहोस्, चम्चाको वेग।
बाँकी पानी (200 ग्राम) र सिजनहरू थप्नुहोस्। हामी बीकर नराखिकन 22 मिनेट, 100º, बायाँतिर घुम्ने, चम्मचको गतिमा कार्यक्रम गर्छौं। छिचोटबाट बच्न हामीले टोकरीलाई माथि राख्छौं। »
तयार !! तपाइँ हामीलाई भन्नुहुन्छ यो कसरी फिट हुन्छ। अंगालो र हामीलाई पछ्याउनु भएकोमा धन्यवाद 😉
क्रिस्टिना गोन्जालेज भन्यो
नमस्कार, मैले तपाईंको निर्देशन अनुसार नुस्खा बनाएको छु र करीव एक घण्टा भएको छ र पसलहरू कडा बाहिर निस्किरहेका छन्। के यसले तपाईलाई वास्तवमै काम गर्दछ? किनकि अन्तमा मैले भाँडामा पसलहरू राख्ने छनौट गरेको छु किनकि म बच्चाहरू भोकाएको छ र यो हुनेछैन किनकि मैले समयको साथ सुरू गरेको छैन।
क्रिस्टिना गोन्जालेजलाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई कस्तो लाग्छ ... शायद यो मासुको प्रकारमा निर्भर गर्दछ ...
आलुहरू पनि मेरो लागि केही कठिन छ
बेर्टालाई जवाफ दिनुहोस्
मैले यो नुस्खा एक दुई पटक बनाईएको छु र हरेक पटक मलाई यो अधिक मनपर्दछ।
मैले सॉसमा केही राम्रो बूउँदो दाखमद्य थपेको छ, केही हरियो सिमी, केही गाजर र करीको छर्कने… रेक्वेबुनास!
तपाईका व्यंजनहरु र तपाइँको स्पष्टीकरण को लागी धेरै धन्यबाद!
धन्यवाद राहेल! कत्ति राम्रो छ कि तपाईं तिनीहरूलाई मन पराउनुभयो। तपाईंको व्यक्तिगत स्पर्शको साथ तिनीहरू स्वादिष्ट हुनुपर्दछ!
नमस्कार, सबैभन्दा पहिले, म तपाईंको ब्लग मन पराउँछु !!
मसँग tm5 छ र मैले यो बिहान यस बिहान निर्देशित पकाउँदा बनाएको छु। मैले अहिलेसम्म यसलाई चलाएको छैन, यो बिहान सबै आराम गरी रहेछ ... दिउँसो म यसलाई अलि बढी गर्मी दिनेछु ... मलाई आशा छ यो बनाउँदैन। यो गाह्रो ... दिन मसँग खाने र काम गर्ने समय मात्र छ ...
केस यो हो कि मैले सोचे कि निर्देशित पकाउने यो तपाईको जस्तै हो, किनकि परिमाणहरू उस्तै हुन् र समय पनि हुन् ... तर मैले यो महसुस गरें कि निर्देशित पकाउँदा यसले यो राख्दैन कि मैले राखिन। पुतली ... र न त पुस्तकमा ... कुल, मैले यो राखेको छैन ... त्यसैले मलाई थाहा छैन यसले धेरै असर गर्छ कि ... म घर आउने डर गर्दछु र यो प्युरी ...
नमस्ते सारा, तपाईंको टिप्पणी को लागी धन्यवाद र हामीलाई लेख्न को लागी धन्यवाद! तपाईंलाई हाम्रो ब्लग love लाई मनपर्दछ भनेर जान्न खुसी लाग्यो
खैर, कहिलेकाँही समान विधि बिभिन्न तरीकाले बनाउन सकिन्छ र पुतलीलाई के राख्नु मुख्यतया मासुको मोटाई र मात्रामा निर्भर गर्दछ। यदि हामी ठूला टुक्रा राख्छौं र धेरै पनि गर्दैनौं भने, तितली बिना यसले राम्रो कार्य गर्दछ। यदि यसको विपरित, हामी धेरै मासु राख्छौं भने, यो पुतली संग राम्रो खाना हुनेछ। तपाइँ हामीलाई भन्नुहुनेछ यो तपाइँको लागि कसरी भयो! यस्तो हुन सक्छ कि आराम संग यो धेरै बाक्लो हुनेछ, तपाईं पानी र एक चुटकी नुन थप्न सक्नुहुनेछ जब तपाईं घर पुग्नुहुन्छ र तातो पार्नुहुन्छ। यदि कुनै पनि कारणको लागि यो धेरै कुचिएको छ भने, तपाईं सिफारिस गर्नुहुन्छ कि तपाईं यो तयारीमा खानालाई पुन: प्रयोग गर्नुहोस्: http://www.thermorecetas.com/coulant-de-carne/ (मालीमा भाँडा बनाउने नुस्खाको साथ पनि मलाई त्यस्तै भयो ...) र यो आश्चर्यजनक चमत्कार बाहिर आयो। अभिवादन 🙂
हे भगवान, यो क्युलेन्ट कस्तो देखिन्छ! म हो वा हो यो प्रयास गर्न चाहन्छु !!!
ठीक छ, तपाईं मलाई अलिकता आश्वासन दिनुहुन्छ, किनकि मैले आधा सामग्री बनाएर नुस्खा बनाइसकेको छु। आज दिउँसो म तपाईंलाई भन्नेछु यो कसरी भयो। तर अर्को पटक म यो पूर्ण गर्नेछु र त्यसैले मसँग culant hehe छ। साथै त्यो ग्रेचिन मेरो लागि ठूलो हो, किनकि घरमा हामी बेकममेल धेरै मन पराउँदैनौं र म क्यानेलोनीमा बेच्मेल प्रतिस्थापन गर्न पुरीको एक नुस्खा खोज्दै थिएँ र मलाई लाग्दछ कि यो एकदम राम्रो हुनेछ!
हाहाहा वास्तवमा क्युलेन्ट चीज मैले थर्मोमिक्समा भएको ठूलो दुर्घटना देखेर एउटा कल्पना गरेकी थिएँ तर जब मैले ढक्कन खोलेको र देखें कि त्यहाँ मेरो मासु स्ट्युको केही बाँकी छैन ... तर मासु र तरकारीको एक समूह भन्दा बाहिर ... तर घरमा हामी केहि पनि फ्याक गर्दैनौं, सबै कुरा पुन: प्रयोग र पुन: प्रयोग हुन सक्छ !! र त्यस्तै स्वादिष्ट र रमाईलो व्यञ्जनहरू कौंलन्ट बाहिर आउँछन्। 🙂 आशा छ तपाईंलाई यो मनपर्‍यो !! एक अंगालो र तपाईं मलाई सुन्दर बताउनुहुनेछ। 😉
फेरी अभिवादन!! म तिमीहरुलाई यो स्वादिष्ट थियो भन्दै फिर्ता आयो! चटनी यसको विन्दुमा रहेको छ किनकि मैले रेसिपीबाट पानी थपेको थियो तर आधा सामग्रीहरू जसले गर्दा यो गाढा भएको छ तर अझै शोरबा थियो, मैले यसलाई मात्र १० मिनेट १०० डिग्री वा चम्चा बायाँ घुमायो। र यो, खाने को लागी तयार छ! .. आलु माइनस एक जोडी अधिक पूर्ववत गरीएको छ, बाँकी पूर्ण तर सही तरिकाले पकाइएको छ, बाक्लो चटनी र स्वादिष्ट पसलियों! मैले सँधै भनेको छु कि एक दिन देखि अर्को स्वाद राम्रो जान्छ, त्यसैले म निश्चित रूपमा दोहोर्याउँनेछु! अर्को पटक म एउटा पुतलीलाई प्रयास गर्नेछु कि आलु कि त पग्लिएन भने पनि! सानो चुम्बन !.
कस्तो खुसी सारा! म यो सुन्न धेरै खुसी छु। ठीक छ, Thermorecetas मा तपाईं फलफूल र तरकारी वा मासु को धेरै stews पाउनुहुनेछ जुन तपाईंले पनि माया गर्नुहुनेछ, एक अँध्यारो! र ... पकाउन! 🙂
बदाम र स्ट्रबेरी केक